Git Sangit News » काठमाडौंको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक, सबैभन्दा धेरै नि’धन बानेश्वर क्षेत्रमा !
काठमाडौंको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक, सबैभन्दा धेरै नि’धन बानेश्वर क्षेत्रमा !
काठमाडौं । पछिल्लो समय अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढेको छ । उपत्यकाको पनि काठमाडैमा नै संक्रमितको संख्या डरलाग्दो छ । काठमाडौं उपत्यकामा विहिवारसम्म करिव ३ हजार सक्रिय संक्रमित पुगिसकेका छन् । दिनहुँ झण्डै २ सयको संख्यामा नयाँ संक्रमित थपिन थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पछिल्लो तथ्यांकले काठमाडौंको अवस्था अत्यन्तै चिन्तित बनेको बताएको छ ।
अहिले होम आइसोलेशनमा रहेका बिरामीको संख्या ४९७ रहेको छ । आइसोलेशनमा रहेका संक्रमितको सङख्या आठ हजार ७२४ रहेको छ । देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या जम्मा १३ हजार १५५ रहेको छ । संस्थागत आइसोलेसनमा नौ हजार २१२ जना रहेका छन् । होम आइसोलेशनमा तीन हजार ९४३ जना छन् । आइसियुमा उपचाररत १३७ जना छन् । बाग्मती प्रदेशका १० जना भेन्टिलेटरमा छन्
प्रकाशित मिति ८ भाद्र २०७७, सोमबार ११:५८